10ka April 2018 xarunta GMDQ ee Muqdisho waxaa xaflad sagootin ah loogu qabtay – GMDQ
10ka April 2018 xarunta GMDQ ee Muqdisho waxaa xaflad sagootin ah loogu qabtay
Dr. Daahir Mire Jibriil oo labadii sano ee la soo dhaafay ahaa Xoghayaha Guud ee GMDQ oo iska casilay shaqadii uu hayay guddiga. Xafladda waxaa ka soo qayb-galay dhammaan xubnaha GMDQ oo ay hor kacayso guddoomiye Marwo Xaliimo yareey iyo xog-heynta guddiga.
Xoghaye Daahir Mire ayaa shaqa ka tegistiisa ku sheegay arrimo shaqsiyadeed. Waxa uu mudane Daahir guddiga uga mahad-celiyay wada-shaqeyntii inta uu xafiiska joogay. Xiriirka iyo wada shaqeynta guddigu halkaan kuma ekaan doonto ayuu yiri mudane Daahir. Waxa uu sidoo kale sheegay in uu kalsooni buuxda ku qabo xirfadda, aqoonta iyo kartida guddiga iyo shaqaalihiisa ay u leeyihiin in waddanka gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ah sannadka 2020ka.
Guddoomiye ku xigeenka GMDQ mudane Sayd Cali Sheekh Maxamad oo ka hadlay munaasabadda ayaa xog-haye Daahir uga mahadceliyay shaqada adag ee uu la qabtay guddiga. Waxa uu sidoo kale Daahir u rajeeyay caafimaad iyo horumar.
Marwo Xaliima Ismaaciil, guddoomiyaha GMDQ ayaa dhankeeda ka hadashay guulihii waaweynaa ee uu gaaray guddiga intii uu xog-hayaha ka ahaa Dr. Dahir Mire. Waxa ay sheegtay in Daahir uu GMDQ la soo qaatay waqti adag uuna qeyb weyn ka qaatay in GMDQ uu cagihiisa isku taago uuna noqdo hay’ad dowli ah oo dhan walba ka dhisan. Ugu danbeyntii guddoomiye Xaliimo waxay xog-haye Daahir ka codsatay in uu sii wado wada shaqeynta guddiga.
GMDQ iyo shaqaalihiisa oo isku duuban waxa ay uga mahadceliyeen shaqada qiimaha badan ee uu guddiga u qabtay waxayna u rajeeyeen Dr. Daahir guul iyo wanaag.